Port State Control (in my own words.) ~ MSU Portal
3/21/2013 11:51:00 PM Navi Kyaw No comments
ကျနော့် ၀သီအတိုင်း Theory မဟုတ်၊ စာအုပ် ထဲ က မဟုတ၊် ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြုံ၊ ကြားဘူး၊နားရည်ဝတွေ နဲ့
Practical aspect ကနေ ပြောပြချင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ (ကုန်းနှစ်)၊(ကုန်း ချုပ်) ဒါမှမဟုတ် ဂျူ နီယာ အင်ဂျင်နီယာတွေ သိရအောင်သဘောနဲ့ပါ။
ဆရာသမား စီနီယာတွေ အတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး။
PSC (PORT STATE CONTROL) ကို နေရာ ဒေသလိုက် ခွဲဝေထားကြ တယ်ဗျာ....
Europe မှာ ဆို ရင် (Paris MOU)
Blacksea က Local PSC ..
Turkey Mamara Sea
German Water Police
မြေထဲ ပင်လယ် က Mediterranean MOU.
INDIAN OCEAN MOU-
အာရှ ဘက်က Asis Pacific MOU မှာ တော့ တရုတ် PRC PSC က နာမည်ကြီး ...
Tokyo Japan MOU ...လည်း အလွန် တင်းကျပ်တာ
USA က USCG ...
Panama PSC.. နဲ့
Vina Del Mar MOU
Chilean Asia Pacific PSC တွေ ကျနော် ကြုံ ခဲ့တယ်၊အခု ဆို ရင် Intensive Campaign တွေ အရမ်းလုပ် နေပါတယ်။
(အော် ငါတို့ သင်္ဘောသားတွေ ကို တယ် လဲ အသက် အန္တရယ် ကင်းစေချင် ကြပါလားလို့ သူတို့ တယ်စေတနာကောင်းကြပါလား
လို့ အထင်စော မသွားစေချင်ပါဘူး ..ကျနော် သုံးနေကြ SPO တွေ လို့ ဘဲ ပြောရတော့ မလိုပါဘဲဗျာ....။
Port State Control ဆို တာ သင်္ဘောတစ် စီးဟာ သူ့ Class and Flag state လို အပ်ချက် တွေ အောက် မှာ
IMO Convection တွေ ဖြစ် တဲ့
MARPOL စတာတွေ ကို လိုက်နာပြီး
စည်းကမ်းတစ်ကျ သွားနေသလား ဆိုတာ လာရောက် ကြည့်ရှူ အကြံပေး ထောက် ပြခြင်း ဖြစ်ရမဲ့အစား..
Inspector တွေ ဟာ အာဃာတတွေ နဲ့ အမဲဖျက် မလို သင်္ဘောပေါ်တက်လာခြင်းပါဘဲ။
နေရာအလိုက် လဒ်စားမှု ရှိပါတယ် ။ကုမဏီ ပိုက် ဆံ ကြိုပေးလို့ ရတဲ့နေရာတွေ ပေးပြီး စီစဉ်ကြပါတယ်။
၁)နိုင်ငံတစ်ခု ၏ PSC အဖွဲ့ အားနှစ်စဉ်ကြေး မဆက်သသော ကုမဏီ ပိုင် သင်္ဘောများကို အကြောင်းရှာ Detain လုပ် ခြင်း
၂)xxxxxx Flag ကို တစ်ခြား နိုင်ငံ အဖွဲ့စည်းက အမဲဖျက် လို့ ထိုနိုင်ငံ သင်္ဘောတွေ ကို ပြသနာပြန်ရှာခြင်း
၃)XXXXX Flag ကိုတစ်ခြားPSC က Detain လုပ် တာများလို့ အဲဒီ ship တွေ ကို XXXXXX က ပြန်တုံ့ ပြန်ခြင်း
၄)တစ် ချို့ နိုင်ငံတွေမှာ အာဏာပိုင်ကို လဒ်ထိုးရင် ကြိုက်တာလုပ်လို့ ရပြီး မထိုးရင် ပလတ်စတစ် တစ်စ တွေ့ တာနဲ့ Heavy Fine ချ ခြင်း
၅)Environmental and Water Police က Garbage Management အတွက် သီးသန့် Training မရှိရင်
USD 150 Fine ချ မယ် ခံ ငြင်းရင် USD15000 အထိ တိုး ချ ခြင်း
အဲ လို မသမာမှု စေတနာ မပါမှု အခက်ခဲတွေ များစွာ ကြားထဲမှာ ကျနော် တို့ သင်္ဘောသားတွေ ခင်ဗျာ...
ဟို လူ့အဖေခေါ် ဒီ လူ့ ပထွေးခေါ် ၊ဟိုတစ်ယောက်ကိုတော့ ဆရာ ခေါ်ရနဲ့ ၊အိပ်ရေးပျက် နေလဲ အစစ်ဆေး ခံရ
လွတ် မြှောက် အောင် Records တွေ ညာရ ၊စာရွက်တွေ ပေါ် မှာ ဖုတ် ပူ မီးတိုက် ဆိုင်းတွေ ထိုး
လိုလေးသေးမရှိအောင် ဧည့် ၀တ် ကျေ ပြ ၊အရက် ဆေး လိပ် စားစရာ ပိုက်ဆံ လို သမျှ ကို ဖြည့်စီး ပေးကာ
အပြုံး မပျက် ခရီးဆက် ရလေသည် က များလေတော့ သည်။
Nevertheless ပေါ့ဗျာ ..အဲဒီ Negative Impact တွေ ဘေးခဏချိတ် ပြီး
PSC တက်လာသမျှ ရစ်တတ်ကျစ်တတ်တာလေးတွေ ကို A to Z သိ သမျှ ဖောက် သည် ချ ပေးလိုက်ရပါသည်။
Inspector တွေ တက် လာသမျှ လမ်းကြောင်းအရ သွားပါမည်။
၁)သင်္ဘော အတွက် ILLC အရ Load Line Draft Marks များထင် ရှား စွာရှိရပါမည်။
၂)Rat Guards များ လဲ နေရာတကျ ရှိနေသင့် သည်။
၃)Gangway ကအတက် Gangway net သည် Factory act အရ ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားပြီး ညအခါတွင် လဲ မီးလုံလောက်စွာရှိရမည်။
၄)Gangway ထိပ် မှာ Security Access control မှာ တာဝန်ကျ အရာရှိ (သို့) AB သာရှိရမည် Security နဲ ပတ်သက်သော
Record ,Visitor Pass Round checks အစစ သည် သူ့နေရာသူ ရှိသင့်ပါသည်။
စစ်ဆေးမည့် နေရာ (Meeting Room or Ship's Office)တွင်
1.Ship Crew list , Ship's Particular , Last PSC report တို့ အဆင် သင့် ရှိရမည်။
2. Statutory Certificates /Others Certificates Files
အရာရှိ သင်္ဘောသားတို့ ၏ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ် COC COE .Watch Keeping Certs Medical Records ပြည့် စုံစွာ ရှိရမည်။
3. SOPEP , NPDES ,GARBAGE Records ,OIL RECORD BOOK updated ဖြစ်ရမည်။
4. Cargo securing , Lashing Maintenance, approved Stability ,Cargo Loading system, Lifting appliance/Chain register
Mooring Log,Ballast Management Records, IMDG records updated ရှိရမည်။
5. ISPS Records ,Rounds ,Tests ,Checks Communication များ ရှိရမည်။
Inspector ၂ ယောက် လာလျှင် တစ်ယောက် က၊ စက်ပိုင်းကဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တစ်ယောက်က ကုန်းပတ် ကို စစ်တတ်သည်။
သူတို့ အား ယဉ်ကျေး စွာဆက်ဆံ ပါ ၊နားထောင် ပါ၊ သေချာ ပြန် ရှင်းပြပါ။
ကိုယ့် ဘက် က မှားလျင် ချက် ခြင်း ပြုပြင် ပါ။ ရန်ဖြစ် ခြင်း ၊အငြင်းပွားချင်းတို့ ကိုေ၇ှာင် ပါ။
Agent သို့ ဆိုင်ရာ Superintendent ကို အကြောင်းကြားထားပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ယောက်ထဲလာလျင် ကြိုတင် စီစဉ် မှုသာဖြစ် နိုင်ခြေ ရှိ၍ အထုအထောင်းသက်သာလေတော့ သည်။
Bridge ပေါ်တွင် -
Passage Plan ,Charts ,Nautical Publication Latest updates and corrections ,Equipments Test/checks
GMDSS Radio communication Records များ
VHF MF HF DSC Test records (acknowledged) ဖြစ်ရပါမည်
တစ်နှစ်တစ်ခါ Deviation Card သည် 3-5 Degree ထက် မများရပါ
၃နှစ်တစ်ခါ Compass swing and adjusted by Professional ဖြစ် ရမည်
GMDSS Battery ကို Load test လုပ် မည် Maintenance Records ရှိရမည်
GMDSS GOC အနည်းဆုံး ၂ယောက် ရှိရမည်။
Watch Keeping schedule W/H and Engine Rooms တွင် ရှိရမည် /ပြသ ထားရမည် (with STCW Code များ ပါရှိရန်)
Energency and Safety
Emergency Preparness file နှင့် Plan ( Latest Emergency Towing wire arrangement Booklet)
LSA /FFA Drill records အားလုံး ExpiryDates Summary လုပ် ထားလျင် အချိန်ကုန် သက်သာမည်။
L/B ,L/R Rescue Boat , L/J,L,Buoy , Immersion suit test check ကြည့် လိမ့်မည်.L/B ,L/R services
B.A bottle/compressor service ,EEBD condition,
L/B Engines Manual start , Emergency Lights တို့ စစ်ပါမည်။
Emergency Fire pump ,Fire Hoses များစစ် မည် Fire Plan Requirement အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
Fixed release Co2 release /water sprinkler system,paint store ,galley and Foam
Periodical Check Maintenance records များကြည့်ပါမည်။
Engines Rooms -အဓိက
Emergency Generator Manual start နှင့် Auto start စစ်ဆေး မည်
Steering Gear room and Chemical Locker Safety Maritime Data Sheet များစစ်မည်။
OWs- Test /Checks Limits and Record
Steering Gear/Test checks /Limits
Bilge holding /pumping .Capacity
Incinerator (if any)
Iso 14001/Environment /Garbage/Sewage
Chemical records and Safety Data
IOPP IAPP EIAPP များကြည့် မည်။
Life Boat Engines Battery သည် တစ်ပတ်တစ်ခါစစ်နေပါလျက် ရာသီဥတုအေးသောအခါ drain ဖြစ်ပြီး
ှSingle Bank မစနိုင်လောက်အောင် အားနည်းနေခြင်း။
Emergency Generator Manual pump တွင် ဆီများလျံကျခြင်း
င်္Fire hoses များ အတိုအရှည် နေရာထားမှားခြင်း
Steering Gear room တွင် ဆီများရှိနေခြင်း
Indication Lamp မီးလုံးများ ကျွမ်းနေခြင်း အရောင်မှိန်ခြင်း
Symbol များ Signs များ မှေးမှိန်နေခြင်း မရှိခြင်း
Medical နှင့် Chemical စွန့်ပစ် records မရှိခြင်း
MF /HF Dsc acknowledged မရခြင်း
Watch Keeping Schedule များ update မဖြစ်ခြင်း
Oil Record book entries မှားတတ်ခြင်း
OWS ကို ဂျူနီယာ အင်ဂျင် နီယာများ Limit Test checks မလုပ်တတ်ခြင်း
Garbage segregation မကောင်းခြင်း Training Records များမရှိခြင်း
တစ်ချို့ က အသေးဖွဲ Observations များကို အချိန်မီပြင် ခိုင်းပါသည်။
တစ်ချို့ Deficiency များကို မူ Code 17 ဖြင့် before Departure မှာ Rectify လုပ် ခိုင်းကာ
နောက် ဆိပ်ကမ်း မှ Code 10 ဖြင့် လာ ပိတ်တတ်ပါသည်။
Port State Control ကို အလှည့် ကျ သင်္ဘောသက်တမ်း အရ Company Fleet Overall status အရ
စစ်စေသည် ဆိုသော်ငြားလည်း အနည်းဆုံး ၆ လ အတွင်းတော့ ထပ် မံ မစစ်ဆေးတတ်ပါ။
မည်သို့ဆိုစေ ကျနော် တို့ သည် မိမိ အသက် အန္တရယ် မိမိ ဥာဏ် ဖြင့် အမြဲ စောင့်ရှောက်နေပါသည်။
ကျန်တာကတော့ နိုင်ငံတစ်ကာအဖွဲ့ စည်းများမှ Individual တို့ ၏ စေတနာ သာဖြစ်လေတော့ သည်။
သို့သော် သင်္ဘောသားတို့ အားအမှန်တကယ် နားလည် အကူညီပေးချင်သောအဖွဲ့စည်း များထက် ပြသနာရှာကာ
ရစ်မည် ညစ်မည် ညှစ်မည်ဆိုသော အဖွဲ့စည်းတွေ ကလဲနေရာ အနှံ့ ရှိနေရာ ကျနော် ကတော့ယူထားရသော
တာဝန်ကြီး နှင့် ရသော လစာသည် မမျှတပါဟု ယူဆမိပါသည်။
ထိုအပြင် ကုမဏီ ကဆရာသမားများ၊Super များသည် အဓိက Budget Cut ကို သာ ဦးစားပေလုပ်ကာ
Performance Bonus မှန်မှန် ယူရန်သာ ဆန္ဒ ပြင်းနေသော သူများကများလေသည်။
၀ိသမ သားတို့ အကြား ယနေ့ Shipping Industries မှ မူလ လက်ငုတ် လူသားဇစ်မြစ် အရင်းနှစ် ပင်လယ် ကူးသင်္ဘောသားတို့
ရပိုင်ခွင့် ချောက်တီးချောက် ချက် ကို ပင် မပေးချင်ဘဲ ကြံဖတ် ညှစ်နေခြင်းကြောင့်
သင်္ဘောသားများဘက် မှ လွန်စွာခံပြင်းနေဆဲ ပင်ဖြစ်လေတော့ သည်။
( ကျန်ခဲ့သည်များရှိသော် နောက်တစ် ခါ ထပ်မံဖြည့်စွတ်တင်ပြပါဦးမည်)။
ရေးသားသူ - ရာစု
Posted in: guide,knowledge